Baarlamanka Puntland oo ka dooday caqabadaha ku gudban nidaamka axsaabta badan – Kalfadhi
Baarlamanka Puntland oo ka dooday caqabadaha ku gudban nidaamka axsaabta badan
Baarlamanka Puntland oo ku guda jira kalfadhigii 43aad ayaa maanta ka dooday warbixin ku aadan sidii ay Puntland uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah iyo caqabadaha hortaagan, taas oo soo diyaariyeen guddi uu intii kalfadhigu socday ay baarlamanku u saareen in ay soo taxliiliyaan caqabadaha iyo fursadaha arrintan ku aadan isla markaasna ay ka soo tala-bixiyaan.
In doorashooyinkaas loo helo dhaqaale lagu qabto iyo taageero caalami ah, wacyiga bulshada oo u baahan in kor loo qaado iyo arrinta xuduudaha dastuuriga ah ee Puntland oo qaarkood gacanta dowladda ka maqan yihiin ayaa ka mid ahaa caqabadaha weli jira ee goluhu aadka uga dooday.
Kulanka oo ay fadhiyeen 50 mudane ayaa dood dheer kadib waxaa lagu ansixiyay go’aan gole oo loo gudbinayo xukuumada kaas oo ay ku jiraan talooyin ku aadan in si deg deg ah xukuumadu u hirgeliso doorashada golayaasha deegaanka oo ku dhacda hannaanka dimuqraadiga ah.
Gudoomiyaha Baarlamanka Cabdixakiin Dhoobo-daareed wuxuu shaaciyay in 43 mudane ay u codeeyeen go’aanka golaha, talooyinka warbixinta ku jira iyo kuwii doodda baarlamanka ka dhashayba loogu gudbiyo xukuumadda.
Talooyinka baarlamanka waxaa ka mid ahayd in goluhu gudbiyo go’aan mudaysan iyo in goluhu wakhtiyeeyo xiliga la rabo in xukuumadu in ay ku qabato doorashooyinkaas, waxaana xildhibaanada qaarkood ay carrabka ku dhufteen sanad iyo barka ugu horeeya ee xukuumada cusub in doorasho lagu gaaro.
Gudoomiyaha baarlamanka ayaa golaha xasuusiyay in awoodda muddaynta iyo qabashada xiliga doorashada ay xaq dastuuri ah u leeyihiin guddiga doorashooyinka KMG ah ee Puntland oo sida goluhu sheegay dhowaan daahfuri doona istaraatiijiyadooda cusub arrintan khusaysa, taas oo ay si horudhac ah ula wadaageen baarlamanka.
Guddiga doorashooyinka KMG ah waa mid madax-banaan.
Dowlad-goboleedka Puntland oo 20 sano jirsatay aysan weli ka dhicin doorasho qof iyo cod ah, waxaana lagu guuldaraystay isku-day ay samaysay xukuumadii Cabdiraxmaan Faroole 2013. Saddex sano ka hor ayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isna magcaabay guddiga KMG ah ee doorashooyinka ee hadda jira.